FiduLink ၀ န်ဆောင်မှု၏အထွေထွေအခြေအနေနှင့်ရောင်းချမှုအခြေအနေ
WWW.FIDULINK.COM > စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
အထွေထွေအခြေအနေများ - ရောင်းချခြင်း - အသုံးပြုခြင်း
၁.၁ ။ ဤရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာအထွေထွေအခြေအနေများသည် "အကြားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆက်ဆံရေးကိုထိန်းချုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်" FIDULINK " ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအော်ပရေတာ: Suxys Ltd, ကုမ္ပဏီ 12706886, Lei: 9845007DF5742FC5K830, IDST ကုတ်: 0HZJ4VL4ECFQ ( link ကို: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , ရုံးချုပ်: Wenlock လမ်း, N17GU, လန်ဒန်, အင်္ဂလန်, အင်္ဂလန်, အီးမေးလ်: info@fidulink.com, ဖုန်း; +44 (0) 20 32 89 59 99 ("FIDULINK") ( ' FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" ဒိုမိန်းများနှင့်ဒိုမိန်းခွဲအားလုံး .IDULINK.com ») နှင့်၎င်း၏ client များ (" ဖောက်သည် ") ။ ဤအထွေထွေကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ FIDULINK သည်ဖောက်သည်များကိုကုမ္ပဏီများတည်ထောင်ခြင်းကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးစုံကိုပေးလိမ့်မည် (" လူ့အဖွဲ့အစည်း ") နှင့်ဆက်စပ်သောအပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများ (" အပိုဝန်ဆောင်မှုများ»ဘဏ်များသို့မဟုတ်ဘဏ်မဟုတ်သောဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူအဖြစ် (") ဘဏ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘဏ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း»).
၁.၂ ။ ဤအထွေထွေကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအခြေအနေများသည်သဘောတူစာချုပ်၏သဘောသဘာဝအရဖွဲ့စည်းထားသည် ဝယ်သူ et FIDULINK ပုံစံ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် FIDULINKFIDULINK ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်စာရွက်ပေါ်တွင်အမှာစာအားအတည်ပြုခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်ဖြစ်စေ၊ ကန်ထရိုက်စာချုပ်) ။ ဖောက်သည်သည် FIDULINK နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းဖြင့်ဤအထွေထွေကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေများကိုလက်ခံသည်။ စျေးနှုန်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများစာရင်းကို FIDULINK ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ရရှိနိုင်သည်။
၁.၃ ။ ဤအထွေထွေကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေများမှခွဲထွက်ခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ခြင်းခံရသောအခြားယေဘူယျအခြေအနေများအားလုံးသည်လိုင်းနှင့် FIDULINK တို့အကြားအရေးအသားဖြင့်သဘောတူညီမှုမရှိပါကမည်သည့်စာချုပ်တွင်မဆိုဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။
၁.၄ ။ ဤအထွေထွေကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအခြေအနေများနှင့်မည်သည့်စာချုပ်များကိုမဆိုပaိပက္ခဖြစ်ပွားပါကဤအထွေထွေကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအခြေအနေများထက်စာချုပ်ပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များသည်သာလွန်ရမည်။ ပaိပက္ခဖြစ်ပွားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပconflictိပက္ခစီမံခန့်ခွဲရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှေ့နေ [@] fidulink.com တွင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
၁.၅ ။ FIDULINK သည်အထွေထွေကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအခြေအနေများအားချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အချိန်မရွေးပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။ FIDULINK.com တွင်ဖော်ပြထားသောအသိပေးချက်တစ်ခုအရဖောက်သည်သည်ဤပြင်ဆင်မှုများအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ FIDULINK သည်အကြောင်းကြားစာပေးပို့သည့် နေ့မှစ၍ သီတင်း ၄ ပတ်အတွင်းစာဖြင့်ရေးသားထားသောကန့်ကွက်မှု မှလွဲ၍ ပြင်ဆင်မှုများကိုလိုင်းမှအတည်ပြုသည်ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်။
၂.၁ ။ FIDULINK သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအား FIDULINK ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသောတရားစီရင်မှုနယ်ပယ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ www.fidulink.com ဖြစ်သည် ) သို့မဟုတ်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းများ (အင်တာနက်၊ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း၊ တက်ဘလက် application၊ IOS application၊ Android application) FIDULINK သည် FIDULINK ၏တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများ (သို့) တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှတဆင့်၊ fiduciary ဒါရိုက်တာများ၊ ယုံကြည်သူအစုရှယ်ယာရှင်များ၊ အင်တာနက်ကုန်သည်အကောင့်၊ ကုမ္ပဏီတံဆိပ်၊ ကုမ္ပဏီတံဆိပ်တုံး၊ အပိုဆောင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိုင်စင်များတောင်းခံခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းရှာဖွေခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းရှာဖွေခြင်း၊ လက်တွဲဖော်ရှာခြင်းနှင့် FIDULINK နှင့် ၀ ယ်သူသည်ကုမ္ပဏီ၏ဖန်တီးမှုအတွက်အသုံးဝင်သည်ဟုယူဆသောအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများ။ “ တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများ” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် FIDULINK၊ လက်အောက်ခံ၊ FIDULINK ၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ (သို့) ဤ ဦး ပိုင်ကုမ္ပဏီ၏အခြားလက်အောက်ခံများ၊ ရှေ့နေများ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်အခြား FIDULINK အေးဂျင့်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
၂.၂ ။ တံဆိပ်ခေါင်းများ၊ တံဆိပ်ခေါင်းများ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများမှအပအခြားဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်သက်ဆိုင်ရာအပို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတို့အကြားသတ်သတ်မှတ်မှတ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုအပေါ် အခြေခံ၍ ပေးလိမ့်မည်။
၂.၃ ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောအစုရှယ်ယာရှင် ၄ ဦး၊ ဒါရိုက်တာ ၂ ဦး၊ အပိုရှယ်ယာရှင်များသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာများသည်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ် မူတည်၍ မှတ်ပုံတင်ငွေတောင်းခံမှုကိုခံရလိမ့်မည်။
၂.၄ ။ FiduLink.com ပလက်ဖောင်း (သို့) ၎င်း၏ subdomains များကိုဖတ်။ သုံးနေစဉ်၊ လည်ပတ်သူသည်သူတို့၏လည်ပတ်မှုကာလအတွင်းသူတို့၏ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုမှုဒေတာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အခြားသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်သင့်တော်သောလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်သုံးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဘဏ်အကောင့် & ဘဏ်နိဒါန်း & ပိုက်ဆံအိတ်
၂.၃ ။ FIDULINK သည်တောင်းခံချက်အရသုံးစွဲသူအားဘဏ်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ဘဏ္introductionာရေးဆိုင်ရာမိတ်ဆက်မှုများ၊ ဘဏ်တစ်ခုတွင်ငွေစာရင်းဖွင့်ခြင်း၊ ငွေပေးချေသည့်အဖွဲ့အစည်း၊ ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းမဟုတ်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ၊ ဘဏ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်း ") ့။ ဤအခြေအနေတွင် FIDULINK သည် Client အားတည်ထောင်မှုစာရင်းကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တည်ထောင်မှုကိုလက်ခံခြင်းနှင့် ၀ ယ်သူနှင့်သူ၏ကုမ္ပဏီ၊ လုပ်ငန်းခွဲ၊ ဌာနခွဲ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တို့၏လိုက်လျောညီထွေမှုတို့အတွက်ရွေးချယ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ရုံး (ကောင်းမွန်သောရပ်တည်မှု၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပံ့ပိုးမှု၊ နေရာများ၊ စသည်) Client သည် FIDULINK မှပံ့ပိုးပေးသောအဖွဲ့အစည်းစာရင်း (သို့) တတိယအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ခြင်း (၀ ယ်သူအပေါ်တွင်သာအာမခံချက်မရှိဘဲ ၀ ယ်သူသည်ကုမ္ပဏီ၏အကောင့်ဖွင့်ခြင်းကိုလက်ခံသည်) တောင်းဆိုချက်နှစ်ခုနှင့်ကန့်သတ်ချက်အတွင်း ၀ ယ်သူနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်များနှင့် / သို့မဟုတ်တည်ထောင်မှုများကိုငြင်းဆိုသည်။ အကြွေး ၀ ယ်ကတ်များ၊ စာအုပ်များ၊ အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းကဲ့သို့သောနောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်အာမခံချက်မရှိ၊ အာမခံချက်မရှိသကဲ့သို့ကမ်းလှမ်းသည်။ တည်ဆဲဥပဒေအရဆုံးဖြတ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရား ၀ င်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်ပြီးသုံးစွဲသူသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးရန်၊ အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ် FIDULINK မှတောင်းဆိုသောအခြားမေးခွန်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များပေးရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
၂.၄ SUXYS Ltd နှင့် FiduLink.com သည်မည်သည့် Wallet နှင့် E-Wallet ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုပေးသည်။ www.FiduLink.com နှင့် / သို့မဟုတ် subdomains များနှင့်အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ် domains များ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀ င်ရောက်သော Wallet သို့မဟုတ် E-Wallet ၀ န်ဆောင်မှုများသည် SUXYS International Limited ၏ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ။ ဝယ်သူကသူသည်မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌မဆို FiduLink.com သို့မဟုတ် SUXYS Ltd အား FiduLink.com ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဝင်ရောက်ခြင်းဆိုင်ရာလိပ်စာနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌မဆိုဆန့်ကျင်။ မရကြောင်းလက်ခံသည်။ ဖောက်သည်သည် FiduLink.com နှင့် SUXYS Ltd အားတရားစွဲဆိုမှုများအားလုံးမှတည်ထောင်ခြင်းများသို့မဟုတ်အခြားဘဏ္fromာရေးသို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အငြင်းပွားမှုဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်သူ၏တည်ထောင်ခြင်းများမှတောင်းခံမှုအရမိတ်ဆက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
FIDULINK.com နှင့်သို့မဟုတ် SUXYS Ltd မှ ၀ ယ်သူအားအကြောင်းပြချက်နှင့်ရှင်းပြချက်မပါဘဲ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ FIDULINK မှ ၀ န်ဆောင်မှုများငြင်းပယ်ခံရပါကမည်သည့်အရာကိုမဆိုပြန်လည်ပေးဆပ်ခွင့်မရှိပါ။ သင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုငြင်းပယ်ခံရပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေရေးရာဌါနသို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်: ရှေ့နေ@fidulink.com (အင်္ဂလိပ်လိုသာအီးမေးလ်) ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) အတည်ပြုခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်၊ သင်သည်လိုက်နာမှု ၀ န်ဆောင်မှု SUXYS Ltd အား Compliance@fidulink.com တွင်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံများသည် FiduLink ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအားယာယီသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းခံရနိုင်သည်။ .com, Suxys Ltd, ရှေ့နေများ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ အိမ်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန နှုတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာရေးခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်မမှန်ဟုယူဆလျှင်သော်လည်းကောင်း FiduLink.com သို့ SUXYS Ltd သို့၎င်း၏အေးဂျင့်များ၊ ရှေ့နေများ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ အိမ်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနအားငွေပြန်အမ်းနိုင်ချေမရှိဘဲ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုချက်ချင်းငြင်းဆန်လိမ့်မည်။ FiduLink.com သို့ subdomains များ (သို့) Suxys Ltd (သို့) ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရှေ့နေများ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ Domiciliation စင်တာသို့တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အခြားတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားတရား ၀ င်တရား ၀ င်မှုများဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။ ထုတ်ဝေမှုသို့ ၀ ယ်သူသည်ကြိုတင်မှာကြားခြင်းမရှိဘဲကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲလက်ခံသည်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအပြည့်အ ၀ ပူးတွဲခြင်းနှင့်တရား ၀ င်အကာအကွယ်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ကျစရိတ်များနှင့် FiduLink မှတောင်းဆိုထားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ၀ န်ခံရန်လက်ခံသည်။ FiduLink.com သို့ SUXYS Ltd သို့ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရှေ့နေများ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ Domiciliation Center သို့ ဦး တည်ချက်နှင့် FiduLink.com သို့မဟုတ် Suxys Ltd သို့မဟုတ်မန်နေဂျာများ၊ ရှေ့နေများ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ မရ။
FIDULINK သည်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ၊ ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာဥပဒေပုံစံများ၊ အခွန်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များအတွက်အမှန်တရားနှင့်မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသော်လည်း၊ ၎င်းသည်အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ကမ်းလွန်စည်းဝေးပွဲ၊ ကုန်းတွင်းစည်းဝေးပွဲ၊ တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်) ထို့ကြောင့်ဖောက်သည်သည် FIDULINK.com မှဥပဒေနှင့်အခွန်အကြံဥာဏ်များကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိကြောင်း၊ လက်ခံသည်နှင့်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ) သို့မဟုတ် FIDULINK (သို့) SUXYS Ltd. နှင့်ဆက်နွှယ်သောအခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်သဘာဝတရား ၀ င်ပုဂ္ဂိုလ်မဆို ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သောဥပဒေရေးရာနှင့်အခွန်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုလက်ခံရရှိရန်နှင့်၎င်းလုပ်ငန်းများသည်မည်သည့်အရည်အချင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုမှမချိုးဖောက်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ၀ ယ်သူသည်သူ့ကုမ္ပဏီ၏ဥပဒေရေးရာ၊ ဘဏ္fiscalာရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအကျင့်စရိုက်ကိုသေချာစေရန်လက်ခံသည်။ ၀ ယ်သူ (များ) သည် SUXYS ltd သို့မဟုတ် FiduLink.com သို့၎င်း၏တာဝန်ခွဲများအားလုံးကိုလုံးလုံးလျားလျားဖြန့်ချိသည်။
ဖောက်သည်သည်စာချုပ်ပါအခွင့်အရေးများကိုတရားမဝင်၊ ညစ်ညမ်းသော၊ အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းသို့မဟုတ်အသရေပျက်စေသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းအာမခံသည်။ FIDULINK အားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမရှုတ်ချပါစေနှင့်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဖြစ်စေ FIDULINK နှင့် FIDULINK Agent များ၏အမည်ကိုပေါင်းစပ်။ မရပါ။ ဖောက်သည်အားဖောက်ဖျက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရပါက FIDULINK သည်မည်သည့်တရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိနှင့်မျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
Client သည်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအားလိုက်နာမှုသေချာစေရန်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များအား FIDULINK မှပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်။ FIDULINK မှပေးသောအချက်အလက်များမှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန် Customer ၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့စတင်မိတ်ဆက်သောကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ရန်ပုံငွေများသည်ရာဇ ၀ တ်မှု (သို့) အခြားတရားမ ၀ င်လုပ်ဆောင်မှုများမပါ ၀ င်ကြောင်း FIDULINK သို့ကြေငြာသည်။ FIDULINK သည်၎င်း၏ဥပဒေရေးရာတာဝန်များအားဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်ဖောက်သည်သည်စီးပွားရေးအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုအပြည့်အဝလျင်မြန်စွာအသိပေးလိမ့်မည်။ ဖောက်သည်ကညွှန်ပြသောစီးပွားရေးအကျိုးခံစားခွင့်များကိုစာချုပ်တွင်လိုအပ်သည့်အတိုင်း“ ပုံစံ” သို့မဟုတ်“ အီလက်ထရောနစ်ပုံစံ” ဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့်လက်မှတ်ထိုးလိမ့်မည်။ Client သည် FIDULINK အားသူ၏ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ၏သဘောသဘာဝကိုအသိပေးပါလိမ့်မည်၊ မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုသည် FIDULINK ၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်နှင့်မဆိုမူတည်လိမ့်မည်။ ၀ ယ်သူနှင့်အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်ကုမ္ပဏီ၏အခြားအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများသည် www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) ၏ဖြေရှင်းချက်ဖြင့်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းအထောက်အထားစိစစ်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ Lite + အနည်းဆုံးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လက်မှတ် + အနည်းဆုံး) ့။ ဖောက်သည်သည် FiduLink.com နှင့် / သို့မဟုတ် SUXYS Ltd မှတာဝန်ရှိမှုအားလုံးကိုဖြန့်ချိပြီးမည်သည့်လိမ်လည်မှုကိုမဆိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်စိတ်မ ၀ င်စားပါ။ FiduLink.com နှင့် SUXYS Ltd တို့ကနိုင်ငံသားများနှင့်နိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသောမူဘောင်အတွင်းငွေကြေးသုံးစွဲသူများအားငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတည်ပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချမှတ်သည်။ ဒီမှာ မရ။ လိမ်လည်မှုကိုအတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်စစ်ဆေးခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့် ၀ ယ်သူသည်ကြိုတင်မှာကြားခြင်းမရှိဘဲအကန့်အသတ်မရှိလက်ခံသည်၊ တရား ၀ င်အကာအကွယ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုလက်ခံသည်။ ကုန်ကျစရိတ် ... နှင့် FiduLink.com မှသူနှင့် FiduLink.com သို့ SUXYS Ltd သို့ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရှေ့နေများ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ Domiciliation စင်တာတို့နှင့်ပတ်သက်သောတောင်းဆိုထားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ၀ န်ခံရန်နှင့် FiduLink.com မှရိုးရှင်းသောတောင်းဆိုမှုဖြင့် သို့မဟုတ် Suxys Ltd (သို့) မန်နေဂျာ (သို့) ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရှေ့နေများ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ စာရင်းကိုင်များသို့မဟုတ်အိမ်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနများ
လုံ့လဝီရိယရှိမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အထောက်အကူပြုစာရွက်စာတမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစွာမပါဝင်နိုင်ပါ။ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများမူရင်းအထောက်အထားများ၊ ၃ လအောက်ရက်စွဲလိပ်စာအထောက်အထား၊ ဘဏ်ရည်ညွှန်းစာများ၊ ကုမ္ပဏီများမှအသိအမှတ်ပြုစာရွက်စာတမ်းမူရင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ပါကအသိအမှတ်ပြုထားသောဘာသာပြန်ဆိုမှုများ၏မူရင်း၊ notarial အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ apostille နှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ် (IDST WORLD) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏လိုအပ်ချက်နှင့် FIDULINK မှမည်သည့်ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းထုတ်လုပ်ရမည်။ Client သည် FIDULINK ၀ န်ဆောင်မှုများမစမီ၎င်း၏အေးဂျင့်များ၊ ရှေ့နေများ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ ဒေသခံအေးဂျင့်များ၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုများနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အာဏာပိုင်များမှလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုတင်ပြရန်တာဝန်ရှိသည်။ FiduLink.com (သို့) SUXYS Ltd သို့တိုက်ရိုက် ၀ ယ်ယူသူ။
၈.၁ ။ ဖောက်သည်သည်ကုမ္ပဏီကုမ္မဏီအမှာစာကိုမှာယူသောအခါ FIDULINK မှတောင်းဆိုသောအခကြေးငွေများကိုပေးချေရမည်။ FIDULINK အခကြေးငွေအချိန်ဇယားသည် FIDULINK ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည် (www.fidulink.com ဖြစ်သည် ) နှင့်၎င်း၏ပလက်ဖောင်း။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောကုန်ကျစရိတ်များအပြင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်အစည်းအဝေးခေါ်ယူမှုသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာများ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များသို့မဟုတ်အတွင်းရေးမှူးများအစည်းအဝေးများတွင်ပါ ၀ င်သောကုန်ကျစရိတ်များ၊ ခေါ်ယူခြင်းကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်၊ သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏ထူးခြားသောအထွေထွေအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခြင်း၊ မည်သည့်အကြောင်းကြားစာသို့မဟုတ်ကြေငြာချက်အားထပ်မံပေးပို့ခြင်းနှင့်အခြားအလားတူကုန်ကျစရိတ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုန်ကျစရိတ်များ။ FIDULINK သည်ငွေပေးချေမှုကိုအပြည့်အ ၀ လက်ခံပြီးမှသာလျှင်ကွပ်မျက်ခြင်းအဆင့်ကိုစတင်သည်။
အားလုံးသောအခကြေးငွေများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များအား FIDULINK မှသတ်မှတ်ထားသောငွေကြေးဖြင့်ပေးချေနိုင်သည်။ ရရှိနိုင်သောငွေကြေးများသည် GBP၊ ယူရို၊ USD၊ USD၊ CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (ယူရိုငွေကြေးအပေါ် အခြေခံ၍ ငွေလဲလှယ်နှုန်း) ။ မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှု၊ အာမခံချက်သို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်တိုင်ကြားမှုများကိုမဆိုသုံးစွဲသူမှအခကြေးငွေများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုသိုလှောင်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ထိုနည်းတူစွာ ၀ ယ်ယူသူ၏ဘက်မှမည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ FiduLink.com သည်ငွေလဲနှုန်းကို၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်စျေးကွက်အမျိုးမျိုးနှင့်မိုဘိုင်း application များတွင်ပုံမှန် update လုပ်သည်။
Bitcoin အတွက် 8.2 ငွေပေးချေမှု။ FIDULINK သည် Bitcoin တွင်ငွေပေးချေမှုကိုငွေလဲလှယ်နှုန်းအဖြစ်လက်ခံသည်။ client သည်လက်ခံမှုသည် crypto-asset ရုတ်တရက်ကျဆင်းသွားပါကငွေပေးချေမှုကိုညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုလက်ခံသည်။ FIDULINK သည် Bitcoin တွင်ငွေပေးချေမှုကိုငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
8.3 Ethereum အတွက်ငွေပေးချေ။ FIDULINK သည် Ethereum တွင်ယူရိုနှင့်အတူငွေပေးချေမှုကိုလဲလှယ်သည့်ငွေကြေးအဖြစ်လက်ခံသည်။ client သည်လက်ခံမှုသည် crypto-asset ရုတ်တရက်ကျဆင်းသွားပါကငွေပေးချေမှုကိုညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုလက်ခံသည်။ FIDULINK သည် Ethereum တွင်ငွေပေးချေမှုကိုငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၈.၄ Western Union ငွေပေးချေမှု။ FIDULINK သည် Western Union ကိုယူရိုငွေဖြင့်လွှဲပြောင်းငွေအဖြစ်လက်ခံသည်။ ၀ ယ်ယူသူက Western Union ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးရန်သဘောတူသည်။ FIDULINK သည် Western Union ၏ငွေပေးချေမှုကိုငြင်းဆိုခွင့်မရှိပါ။ Western Union ငွေပေးချေမှု (Bank Account Transfer Mode) အတွက်သာရနိုင်သည်။
၈.၅ MoneyGram ဖြင့်ငွေပေးချေခြင်း။ FIDULINK သည် MoneyGram တွင်ငွေပေးချေမှုကိုယူရိုငွေကိုလွှဲပြောင်းငွေအဖြစ်လက်ခံသည်။ သုံးစွဲသူသည် MoneyGram ၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးရန်သဘောတူသည်။ FIDULINK သည် MoneyGram မှငွေပေးချေရန်ငြင်းဆိုခွင့်မရှိပါ။ MoneyGram ငွေပေးချေမှု (Bank Account Transfer Mode) အတွက်သာရနိုင်သည်။
၈.၂ ။ နှစ်စဉ်ကြေးအပြင် Client သည် FIDULINK အားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ခွင့်ပြုသည် (“ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှု”) ကိုပေးရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ရုံး (လိပ်စာ)၊ နေထိုင်သူအေးဂျင့်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများပါ ၀ င်မှုသည်တရား ၀ င်မှုအရကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပထမနေ့ မှစတင်၍ အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဒေသခံမှတ်ပုံတင်မှထုတ်ပေးသည့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ အဆင့်အတန်း၊ ဒါရိုက်တာခန့်အပ်ခြင်းနှင့်အစုရှယ်ယာများဝေငှခြင်းနှင့်ရှယ်ယာလက်မှတ် (များ) နှင့်သက်ဆိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်။
နှစ်စဉ်ကြေးသည်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်သက်တမ်းတိုးသည့်အခါနှစ်စဉ်ပေးရသောပြားသည့်အခကြေးငွေဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီကုမ္ပဏီ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပြင်မှတ်ပုံတင်ရုံးသက်တမ်းတိုးခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်သက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏အစိုးရအခကြေးငွေများပါ ၀ င်သည်။ ဒီအခကြေးငွေတွေပြန်အမ်းမပေးပါဘူး
အစိုးရသည်အခွန်များ၊ အခွန်အခများ၊ အခွန်များနှင့်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များသို့ပေးဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအခွန်များအတွက် ၀ င်ငွေသည် FIDULINK ကိုတာဝန်ရှိသည်။ အားလုံးအသေးစားတရားမျှတကုန်ကျစရိတ်။
၀ န်ဆောင်မှုခံသူက FIDULINK ၏နှစ်စဉ်ကြေးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခွင့်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုစတင်ခြင်းမတိုင်မီအနည်းဆုံးတစ်လကြိုတင်ပေးဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာပုံစံပြောင်းလဲမှုကိုဖောက်သည်ထံသို့အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ဖောက်သည်သည် FIDULINK ကြောင့် Visa သို့မဟုတ် MasterCard အကြွေးဝယ်ကဒ်ကို အသုံးပြု၍ သူ၏နာမည်ဖြင့်ဖြစ်စေငွေပေးချေနိုင်သည်။ FIDULINK သို့အကြွေးဝယ်ကဒ် (သို့မဟုတ်အလားတူတူရိယာ) ၏အချက်အလက်များကိုငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ်လွှဲပြောင်းပေးသောဖောက်သည်များသည် FIDULINK သည်၎င်းတို့၏အကြွေးကဒ်ကိုကုန်ကျစရိတ်များနှင့် / သို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အခွန်အခများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော FIDULINK အပြင်အခြားတရားမျှတသောငွေပေးချေမှုများသို့မဟုတ်အသေးသုံးငွေကုန်ကျစရိတ်များ။ ဖောက်သည်က FIDULINK သည်ဤအထွေထွေအခြေအနေများနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့်အညီကဒ်ဒေတာကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသုံးနိုင်သည်ကိုလက်ခံသည်။
ငွေပေးချေခြင်း (သို့မဟုတ်) credit card ဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းအတွက်အထူးအခြေအနေများ
၈.၃ ။ FIDULINK မှပုံမှန်ငွေပေးချေမှုနှင့်ဖောက်သည်အားထိုသို့သောဖောက်ဖျက်မှုအားအကြောင်းကြားရန်သင့်လျော်သောအားထုတ်မှုများရှိသော်င်နှစ်စဉ်ကြေးပေးချေရမှုနှင့်ကုန်လွန်သွားလျှင် FIDULINK သည်သုံးစွဲသူ၏ (debit သို့မဟုတ် credit) ကဒ်မှငွေထုတ်ယူနိုင်သည်ဟုလိုင်းကသဘောတူသည်။ ကုမ္ပဏီအားကောင်းမွန်သောမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဆင့်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန်ချမှတ်ထားသောမည်သည့်ပြစ်ဒဏ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဒဏ်ကြေးအပါအ ၀ င်ဤသဘောသဘာဝ၏ထူးခြားသောငွေပမာဏ။
ဤကိစ္စတွင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည် FIDULINK သည် ၀ င်ငွေကုမ္ပဏီ၏သက်ဆိုင်သည့်နှစ်ပတ်လည်မှတ်ပုံတင်ကြေးကိုပေးဆောင်ရန်ရက်ပေါင်း ၆၀ ရှိမည်ဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ငွေပမာဏမည်မျှပါဝင်မည်ကိုထပ်မံလက်ခံသည် ရက်ပေါင်း ၆၀ စောင့်ဆိုင်းရသောကာလနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်ထပ်မံပြစ်ဒဏ်မဆို။
၈.၄ ။ တတိယပါတီသည် ၀ ယ်ယူသူအတွက်ကတ်ကိုငွေပေးချေသည်အထိသုံးစွဲသူသည်ကတ်ကိုင်ဆောင်သူသည်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူသည်ငွေပေးချေမှုကိုသဘောတူပြီးကတ်သုံးစွဲမှုနှင့်ကဒ်ပြားဒေတာနှင့်အညီကတ်သုံးစွဲမှုကိုအာမခံသည်။ အထွေထွေအခြေအနေများနှင့်သီးသန့်မူဝါဒ။ ဝယ်သူသည်၎င်းပိုင်ရှင်မှရရှိသော ၀ င်သူ၏ကြေငြာချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်နှင့်ဤပုံစံတွင်ဤနေရာ၌ရရှိနိုင်ပါသည် MODEL ကိုရရှိရန်တာဝန်ရှိသည်။
၈.၅ ။ ဖောက်သည်သည်ဘဏ်လုပ်ငန်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းအတွက်တစ်လုံးတည်းငွေအတွက် FIDULINK ကိုအကြွေးတင်နေသည်။ ဤစီမံခန့်ခွဲမှုအခကြေးငွေများကိုအချိန်မရွေးအသိပေးခြင်းမရှိဘဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ယူအက်စ်၊ USD၊ CAD၊ စင်ကာပူ၊ စင်ကာပူ၊ နယူးဇီလန်၊ AUD၊ PLN၊ BTC တို့ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ဖောက်သည်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကို FIDULINK မစတင်မှီနှင့်တည်ထောင်သူများနှင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်မီအုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေများကိုပေးရလိမ့်မည်။ သုံးစွဲသူသည် FIDULINK သို့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအခကြေးငွေများကို Visa သို့မဟုတ် MasterCard အကြွေးဝယ်ကဒ်နှင့်သူ၏နာမ၌ဖြစ်စေ၊ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေပေးဆောင်နိုင်သည်။ FIDULINK သို့အကြွေး ၀ ယ်ကဒ်အချက်အလက်ပေးပို့ခြင်းကိုငွေပေးချေရာတွင်အသုံးပြုသူများသည် FIDULINK သည်၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသောအကောင့်အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေအပြည့်အတွက်ငွေချေကတ်ကိုငွေတောင်းခံလွှာကိုလက်ခံလျှင် ၀ န်ဆောင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်အပြင်လက်ခံလိမ့်မည်။
Marketplace-FiduLink.com သို့မဟုတ် App-FiduLink.com ဖောက်သည်အကောင့်
အွန်လိုင်းမှမှာယူသောအခါ FIDULINK သည်သီးသန့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်သည်ကိုဖောက်သည်ကလက်ခံသည်။ ဖောက်သည်သည်သူ၏အကောင့်ကိုအပြည့်အ ၀ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန် FIDULINK ကိုလက်ခံသည်။ ဖောက်သည်သည် FIDULINK နှင့် SUXYS Ltd တို့ကိုတာ ၀ န်မှကင်းလွတ်စေပြီး၊ သူ၏စကားဝှက် (သို့) ၀ င်ရောက်ရန် login ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုံခြုံရေးအစိတ်အပိုင်းများကိုမလိုက်နာပါကတာဝန်ဝတ္တရားအားလုံးမှလွတ်ပေးသည်။ အကောင့်ဖောက်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်လျှင်ဖောက်သည်က FIDULINK သည်ဤအကောင့်ကိုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဖောက်သည်အားအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲပိတ်ဆို့ခြင်းကိုလက်ခံသည်။ ၀ ယ်သူကသူ၏အကောင့်လုံခြုံရေးနှင့်သူ၏လက်လှမ်းမီမှုအတွက်သူသာလျှင်သူ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်နှင့် login တစ်ခုတည်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဟုသဘောတူသည်။
ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ခန့်အပ်ခြင်း
၈.၆ ။ ဖောက်သည်သည် FIDULINK အား proxy ပေးပြီး FIDULINK သို့တင်သွင်းသောအမှာစာပုံစံအရကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရမည့်သူအားလုံးနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်ခံမှုကိုလက်ခံကြောင်းကြေငြာခြင်းမပြုသေးသောသူများသည်သူတို့၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဒါရိုက်တာအဖြစ်သဘောတူလက်ခံသည် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်နှင့်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီသည် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်သူ၏ခန့်အပ်မှုနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုအသိအမှတ်ပြုသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရသူဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုသူများလည်းရှိသည်။
၈.၆.၁ ဖောက်သည်သည် FIDULINK ကိုခွင့်ပြုပြီး FIDULINK သို့တင်သွင်းသောအမှာစာပုံစံအရကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရမည့်သူများနှင့်ရုံး၏လက်ခံမှုကိုကြေငြာခြင်းမပြုသေးသေးသူများသည်သူတို့၏ရုံးသို့ဒါရိုက်တာအဖြစ်သဘောတူခွင့်ပြုသည် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်နှင့်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီသည်အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီ။ ဒါ့အပြင်ဒါရိုက်တာသည်သူ၏ခန့်အပ်မှုနှင့်တာဝန်ဝတ္တရား၏အသိပေးသဘောတူညီချက်၏ဘာသာရပ်ကြောင်းသက်သေခံ။
၈.၆.၁ ဖောက်သည်သည် FIDULINK ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုပြီး FIDULINK သို့တင်သွင်းသည့်အမှာစာပုံစံအရကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရမည့်သူအားလုံးကို (အမည်စာရင်းသွင်းထားသောဒါရိုက်တာ၏အဖြစ်အပျက်တွင်တာဝန်နှင့်မဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ရမည်) နှင့်လက်မှတ်မထိုးရသေးသူကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ကုမ္ပဏီလက်ခံကြောင်းကြေငြာချက်သည်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်တွင်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုံးသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး စီသည်အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူများသည်အတွင်းရေးမှူးသည်သူ၏ခန့်အပ်မှုနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ၏အသိပေးသဘောတူညီချက်၏ဘာသာရပ်ကြောင်းသက်သေခံ။
၈.၇ ။ Third-party ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်ယင်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအားတတိယပါတီ ၀ န်ဆောင်မှုများမှရယူရန်လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ရန်အတွက် FIDULINK သို့ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်မလိုပါ။ ဒီငွေပမာဏကို FIDULINK ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက်သီးသန့်ကောက်ယူပါတယ်။ ဖောက်သည်က FIDULINK သည်ဖောက်သည်နှင့်တတိယပါတီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတို့အကြားတည်ဆောက်ထားသည့်မည်သည့်စာချုပ်အရဆက်သွယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိကြောင်း ၀ န်ဆောင်မှုခံသူကအသိအမှတ်ပြုသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှ FIDULINK သည် Third-party ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူထံမှစီးပွားရေးမိတ်ဆက်ပေးသည့်ပရီမီယံကိုလက်ခံရရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှထိုကဲ့သို့သောပရီမီယံ၏ပြန်လည်ကျဆင်းခြင်းအတွက်မည်သည့်တောင်းဆိုချက်ကိုမဆိုဖော်ပြသည်။
သုံးစွဲသူနှင့် FIDULINK တို့သည် FIDULINK မှပေးပို့နိုင်သော FIDULINK အင်တာနက်ပေါ်တယ်သို့မဟုတ်ဖက်စ်၊ SUBJECT မှတစ်ဆင့်အီးမေးလ်၊ အီးမေးလ်၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အီးမေးလ်ဖြင့်ပူးတွဲစရိတ်အစီရင်ခံစာများသို့မဟုတ်အခကြေးငွေ။ သုံးစွဲသူနှင့် FIDULINK သည်ညွှန်ကြားချက်များ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ FIDULINK အတွက်ရည်ရွယ်သည့်ဆက်သွယ်မှုများအားလုံးကို၎င်း၏ရုံးချုပ်သို့ဖြစ်စေ FIDULINK သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားအချိန်မရွေးစာဖြင့်ရေးသားအသိပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ လိုင်းအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို၎င်း၏လိပ်စာသို့မဟုတ်လိုင်းထက်အခြားမည်သည့်လိပ်စာသို့မဆိုပေးပို့လိမ့်မည်။ FIDULINK ကိုအချိန်နှင့်အမျှစာဖြင့်ရေးသားအသိပေးလိမ့်မည်။ လိုအပ်ပါက FIDULINK သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားအချိန်တိုင်းဆက်သွယ်နိုင်ရမည်ဖြစ်သဖြင့်သူသည်သူ၏လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်း / ဖက်စ်နံပါတ်ကိုပြောင်းလဲပါက FIDULINK အားချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန်တာဝန်ရှိသည်။ Client အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအတော်များများအတွက် FIDULINK ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းရန်ရည်ရွယ်ထားပါကအီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့သောရပ်စဲခြင်းအကြောင်းကြားစာကိုပေးပို့သင့်သည် info@fidulink.com .
၁၀.၁ ။ FIDULINK သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်“ ဒေတာဘာသာရပ်” အဖြစ်ရည်ညွှန်းထားသောဖော်ထုတ်သို့မဟုတ်ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ပါ ၀ င်သည့်အထွေထွေဒေတာကာကွယ်မှုစည်းမျဉ်းဥပဒေ (RGPD / GDPR) ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်အညီဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောသဘာ ၀ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာအမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ တည်နေရာအချက်အလက်၊ ဆက်သွယ်မှုအမှတ်အသားတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအချက်များကဲ့သို့သောအမှတ်အသားကိုရည်ညွှန်းခြင်းအားဖြင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ဤသဘာဝလူ၏ဇီဝကမ္မဗေဒ၊ ဇီဝကမ္မဗေဒ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေး၊
ဒေတာထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ရယူခြင်းစသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်စေ၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်းအပြင်အချက်အလက်များပါ ၀ င်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ၄ င်းတို့၏ကန့်သတ်ချက်များသို့မဟုတ် ဖျက်သည်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိသူများမှာ FIDULINK အဖွဲ့မှကန်ထရိုက်တာများသို့မဟုတ်အရန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည့်အေးဂျင့်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိုင်တီနှင့်ဆက်သွယ်ရေးပေးသွင်းသူများ၊ တင်ပြရန်ဆန္ဒရှိသည်၊ ကုမ္ပဏီများ၏အများပိုင်မှတ်ပုံတင်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အာဏာပိုင်များ။ ဤဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုတစ်ခုချင်းစီသည် GDPR နှင့်အညီပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီးတတိယပါတီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်ပြီး၊ နှစ် ဦး စလုံးသည် GDPR ၏တာဝန်ဝတ္တရားများဖြစ်သောအချက်အလက်အချက်အလက်များ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သူမည်သူမဆိုအတွက်လျှို့ဝှက်ခြင်းတာဝန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ ၀ ယ်ယူသူများ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ ("KYC") နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမှန်ကန်စွာပေးအပ်ရန်သေချာစေရန်အလို့ငှာအချက်အလက်အပြည့်အစုံတွင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏အသေးစိတ်နှင့်အမည်၊ နိုင်ငံသား၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နေထိုင်ခွင့်လိပ်စာများ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်များ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းနေ့စွဲများနှင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်တွေအပြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုတဲ့အထောက်အကူပြုစာရွက်စာတမ်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်သုံးစွဲသူ၏ညွှန်ကြားချက်များပါဝင်ပါတယ်။ KYC လုပ်ငန်းစဉ်ကို ISDT WORLD application (www.idst-world.com) ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ဖောက်သည်သည်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို FIDULINK နှင့်နောက်ဆုံးထားစာချုပ်ဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုတစ်လျှောက်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ထားရှိရန်နှင့် FIDULINK မှသတ်မှတ်ထားသောပုံစံများအတိုင်းနောက်ဆုံးထားရှိရန်သူ၏တာ ၀ န်နှင့်သက်ဆိုင်သောအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကိုတင်သွင်းရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
၁၀.၂ ။ FIDULINK (သို့) နေထိုင်သူအေးဂျင့်သည် FIDULINK ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုသူအဖြစ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုပ်ငန်းခွဲအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဒေတာဝေမျှသောပါတီများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒတွင်ရရှိနိုင်သည်။
၁၀.၃ ။ ဝယ်သူကသူသည် FIDULINK ကိုဆက်သွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ပိုရနိုင်သည်ဟုဝန်ခံသည် info@fidulink.com ။ ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အခြားမည်သည့်ဘာသာကိုမဆို FIDULINK မှသုံးစွဲသူအားယဉ်ကျေးသောအရာအဖြစ်သာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၁၀.၄ ။ ဝယ်သူအားသူသည်သဘောတူညီချက်ကိုရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုအသိပေးသည်။ ခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းသည်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမတိုင်မီအပြောင်းအလဲ၏တရားဝင်မှုကိုမထိခိုက်စေဘဲထပ်မံအကြောင်းပြချက်တစ်ခု၊ တရား ၀ င်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းရှိလျှင်၎င်းသည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏တရားဝင်မှုကိုမထိခိုက်ပါ။
ဖောက်သည်က FIDULINK အားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုဖောက်သည်မှ FIDULINK သို့ကူးစက်သောမည်သည့်တတိယပါတီအချက်အလက်များ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုအပြည့်အ ၀ ရရှိသည်ကိုအာမခံသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းသို့မဟုတ် Prudential တာဝန်များနှင့်လိုက်နာခြင်းအကြောင်းများကြောင့်ဤတတိယပါတီအချက်အလက်များကို။
၁၀.၅ ။ FIDULINK၊ ၎င်း၏ဒါရိုက်တာများ၊ ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်များသည်အချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်စွာကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ လုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအားလုံးရှိသော်လည်းအီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပါအ ၀ င်အချက်အလက်များကိုလိုင်းနှင့် FIDULINK အကြားထုတ်လွှင့်နေစဉ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတတိယပါတီများကကြည့်ရှုနိုင်သည်။ FIDULINK နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်ဖောက်သည်သည် FIDULINK အသုံးပြုသော protocol နှင့်လိုက်ဖက်သောအချက်အလက်လုံခြုံရေး protocol ကိုပံ့ပိုးသော browser software အပါအဝင်တတိယပါတီများမှထုတ်လုပ်သော software ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ။
၁၀.၆ ။ ဒီအပိုဒ်၏အခြေအနေတွင်ပေးအပ်သတင်းအချက်အလက်ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤအရာသည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားသောလင့်ခ်တွင်ရရှိနိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒတွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည်။
Client သည်ဤအရည်အချင်းမပြည့်ဝမှုအား FIDULINK.com သို့ SUXYS Ltd သို့စာရေး (သို့) အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိလျှင် ၀ ယ်သူသည်၎င်းမသန်စွမ်းမှု၏အန္တရာယ်ကို ၀ န်ခံလိမ့်မည်။ FiduLink.com သို့မဟုတ် SUXYS Ltd မှအီးမေးလ်။
၁၂.၁ ။ FIDULINK၊ ၎င်း၏ဒါရိုက်တာများ၊ ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ်အေးဂျင့်များသည် FIDULINK၊ ၎င်း၏ဒါရိုက်တာများ၊ ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ်အေးဂျင့်များအနေဖြင့်စုစုပေါင်းကျူးလွန်ခြင်းမရှိပါကတိကျသောပြprovision္ဌာန်းချက်များကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းမရှိဘဲ FIDULINK ၏ဒါရိုက်တာများ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ ပေါ့ပေါ့ဆဆသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရဖယ်ထုတ်ပစ်။ မရနိုင်သောအခြားမည်သည့်တာဝန်ယူမှုကိုမဆို။ FIDULINK သည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှု၊ သပိတ်မှောက်မှု၊ အင်တာနက်တိုက်ခိုက်မှု၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကူးစက်ရောဂါနှောင့်နှေးမှုသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်မည်သည့် ၀ န်ထမ်းများ၏တာဝန်များကိုကျေပွန်မှုကြောင့်မဆိုဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
၁၂.၂ ။ အခြားသူ၊ စနစ်၊ အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုအခြေခံအဆောက်အအုံ၏အမှား၊ ပျက်ကွက်ခြင်း၊ လျစ်လျူရှုမှု၊ ပြုမူမှုသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြစ်စေ၊ ဖောက်သည်ကခံရလိမ့်မည်။
၁၂.၃ ။ အကယ်၍ အပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါက FIDULINK ကိုတာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ FIDULINK ၏နောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်တာ ၀ န်ယူမှုသည် ၄ ​​င်း၏တွဲဖက်များသို့မဟုတ်အခြားတတိယပါတီ၏ရွေးချယ်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကိုတင်းကြပ်စွာကန့်သတ်ထားသည်။
၁၂.၄ ။ စာတိုက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကြေးနန်း၊ ကြေးနန်း၊ ဖက်စ်၊ တယ်လီဖုန်းနှင့်အခြားဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အထူးသဖြင့်နှောင့်နှေးမှုများ၊ နားလည်မှုလွဲခြင်းများ၊ FIDULINK သည်ကြီးလေးသောပေါ့ဆမှုမပြုပါကတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းသို့မဟုတ်မိတ္တူပွားခြင်းများသည်ဖောက်သည်၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။
၁၂.၅ ။ စာချုပ်ပါ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လိုအပ်သောဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုအားပျက်ကွက်ပါကစာချုပ်ပါဝန်ဆောင်မှုများ၏မူဘောင်အတွင်းလက်ခံရရှိသည့်မည်သည့်စာတိုက်သို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းအတွက် FIDULINK ကိုတာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ FIDULINK သည်ညွှန်ကြားချက်များအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပျက်စီးခြင်းများအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။
၁၂.၆ ။ အထူးသဖြင့်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လျှင် FIDULINK သည်ဘဏ်နှင့်လိုင်းကြားဆက်ဆံရေးတွင်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် FIDULINK သည်ဘဏ်နှင့်လည်းကြားဆက်ဆံရေးအတွက်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှတာ ၀ န်မရှိပါ။ FIDULINK သည်ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ဘဏ်၏စီမံခန့်ခွဲမှု၏ ၀ န်ထမ်း၊ ကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်၎င်း၏အမည်ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်သို့မဟုတ် ဘဏ်အမည်
၁၃.၁ ။ မည်သည့်ကန်ထရိုက်စာချုပ်သည်မဆိုသတ်မှတ်ထားသောကာလအတွက်ကြာရှည်ခံမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကန ဦး ကြာချိန်နှင့်တန်းတူဆက်တိုက်ကာလများအတွက်အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။ အခြားရှုထောင့်များအားလုံးအတွက်၊ မည်သည့်စာချုပ်သည်မတူညီသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။ FIDULINK သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်အခြားသက်တမ်းသို့အနည်းဆုံး ၂ လကြိုတင်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခြင်းဖြင့်ရည်ညွှန်းထားသည့်သက်တမ်းအတွက်သို့မဟုတ်သက်တမ်းတိုးခြင်းသို့မဟုတ်သက်တမ်းတိုးခြင်းကာလအဆုံးအတွက်မည်သည့်စာချုပ်ကိုမဆိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ရပ်စဲခြင်းသည်ပါတီတစ်ခု၏အခွင့်အရေးသို့မဟုတ်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုမထိခိုက်စေဘဲ၊ တရားမျှတသောအကြောင်းပြချက်အတွက်ချက်ချင်းရပ်စဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၃.၂ ။ ဖောက်သည်များ၏တည်ဆဲဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် / သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့် FIDULINK.com သို့မဟုတ် SUXYS Ltd သည်ကုမ္ပဏီများမှပေးအပ်သောအပို ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်စာချုပ်အပါအ ၀ င်မည်သည့်စာချုပ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုချက်ချင်းရပ်စဲနိုင်သည်။ FIDULINK နှင့်သို့မဟုတ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် Client သည်ဤကုမ္ပဏီအားရပ်စဲပြီးပါကမည်သည့်ကုမ္ပဏီတွင်မဆိုလစ်လပ်နေရာအစားထိုးရန်လိုအပ်သောအစီအမံများကိုယူရမည်ဖြစ်ပြီး FIDULINK သည်ချက်ချင်းရပ်စဲပြီးနောက်မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်မဆိုတာဝန်ရှိသည်ဟုအတိအလင်းသဘောတူသည်။
၁၃.၃ ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်ပတ်ရန်အတွက်မည်သည့်စာချုပ်မဆိုတစ်နှစ်ပြည့်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှစာချုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်လျှင်သို့မဟုတ် FIDULINK အားကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအခြားကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသို့လွှဲပြောင်းရန်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီကိုဖျက်သိမ်းရန်တောင်းဆိုလျှင် FIDULINK သည်ကုမ္ပဏီအားလုံးအားလွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုပါ။ ထူးချွန်သောပေးချေမှုများ၊ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးနှင့် (သို့မဟုတ်) အခကြေးငွေများ (အစိုးရ၏အခွန်များ၊ အခွန်အခများ၊ အခွန်အခများနှင့်တတိယပါတီများသို့အခြားငွေပေးချေမှုများအပါအ ၀ င်ဒါရိုက်တာများသို့မဟုတ်ဂေါပကရှယ်ယာရှင်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခကြေးငွေများအပါအ ၀ င်) လွှဲပြောင်းကြေး€ 13.3) ကိုအပြည့်အဝပေးချေပြီးဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီသည်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်သက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်ဖောက်သည်သည်အေဂျင်စီစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ပိုင်ခွင့်စာချုပ်သည်ဝယ်သူကလက်မှတ်မထိုး သ၍ ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုဖောက်သည်အားပေးပို့ရန်ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည် FIDULINK က၎င်းကိုမအောင်မြင်ပါ။
အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေ (၃) ခုပြည့်စုံပါက ၀ န်ဆောင်မှုခံသူသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးကုန်ကျစရိတ်များကိုအပြည့်အဝပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။ (၁) FIDULINK သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ။ (၂) FIDULINK အားလုံးအားလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဆွစ်ဘဏ်များအနေဖြင့်တရား ၀ င်စိစစ်ရေးသဘောတူညီချက်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များအရမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုချက်ရရှိထားသော ၀ ယ်သူ၏ခိုင်လုံသောအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူအပါအ ၀ င်၊ အထူးသဖြင့် ၃ လထက်မပိုသော utility bills၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်ဘဏ်မှရည်ညွှန်းစာကဲ့သို့သော FIDULINK မှဖောက်သည်။ (၃) ပြန်လည်ပေးချေရန်တောင်းဆိုမှုကိုရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းတင်ပြသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ငွေပေးချေမှုကိုလိုင်းမှပေးသည်။
၁၃.၄ ။ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းဖြင့်ပြီးဆုံးသွားပြီးနောက်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်ဘဏ်အကြားဆက်နွယ်မှုအားလုံးကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
မည်သည့်ဖောက်သည်မဆိုဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရန်တောင်းခံပြီး ၃ ရက်အတွင်းသူ၏တောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ဖျက်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက် (၃) ချက်ကိုလိုက်နာပါက ၀ န်ဆောင်မှုခံသူအနေဖြင့်တပ်ဆင်ခကိုအပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အောက်ပါအချက်သုံးချက်ကိုလိုက်နာပါက (၁) FIDULINK ၏အကူအညီဖြင့်ဘဏ်သည်ဖွင့်လှစ်။ မရပါ။ သုံးစွဲသူ၏အကောင့်နှင့် (၂) FIDULINK (သို့) ဘဏ်သည်သဘောတူစာချုပ်၏တိကျသောညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုထားသောသုံးစွဲသူ၏တရားဝင်အထောက်အထားမိတ္တူအပါအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှဖြည့်စွက်ပြီးလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုလက်ခံရရှိသည်။ FIDULINK မှဆွစ်ဘဏ်များနှင့် FIDULINK မှဝယ်သူထံမှတောင်းဆိုထားသောမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းမဆိုခရက်ဒစ်ကဒ်ငွေစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ ကုန်ပစ္စည်းငွေတောင်းခံလွှာ၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်၊ '' ရန်ပုံငွေများ၏စီးပွားရေးဇာစ်မြစ်၏အခြားအထောက်အထား။ ငွေပြန်အမ်းခြင်းကိုကမ်းလှမ်းသည့်တစ်ခုတည်းသောကိစ္စဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်မှပြက္ခဒိန်သုံးရက်အကြာတွင်သူတို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ဖျက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုငွေပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။
၁၃.၅ ။ မည်သည့်ပြန်အမ်းငွေကိုမဆို FIDULINK သို့ငွေပေးချေသည့်နည်းတူသာငွေပေးချေနိုင်သည်။
ဤနေရာတွင်ပါရှိသောအပိုဒ်တစ်စုံတစ်ရာသည်စာဖြင့်ရေးသားထားသောဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်တရားရုံးသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဖြစ်စေ၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှသော်လည်းကောင်း၊ တရားမ ၀ င်၊ မမှန်ကန်တဲ့၊ တားမြစ်ထားသော၊ ထိုကဲ့သို့သောတရားမဝင်, တရားမဝင်, တရားမဝင်, တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှု၏အတိုင်းအတာအထိ။ အခြားဝါကျများသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကွပ်မျက်ခြင်းအားဖြင့် FiduLink.com ကွန်ယက်တွင်ပါဝင်သောရှေ့နေများ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ စင်းလုံးထွင်စာရင်းကိုင်များ၊ Notary များ၊ စာရင်းစစ်များနှင့် FiduLink.com ကွန်ယက်တွင်အခြားကိုယ်စားလှယ်များငှားရမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ စာချုပ်တစ်ခုမှရရှိသော Client ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကို FIDULINK ၏စာဖြင့်သဘောတူညီချက်ဖြင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များသို့သာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
ဤသဘောတူစာချုပ်ကိုဗြိတိသျှဥပဒေနှင့်အညီအုပ်ချုပ်သည်။ ယင်း၏နိဂုံးချုပ်, တရားဝင်မှုသို့မဟုတ်ရပ်စဲသက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များအပါအဝင်စာချုပ်နှင့်ဆက်စပ်။ ပေါ်ပေါက်သည့်ပါတီများအကြားမည်သည့်သဘောထားကွဲလွဲမှု, ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်တရားရုံးများတနည်း Suxys Ltd မှ၏သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
FiduLink.com မှကြိုဆိုပါသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းခွဲများ၊ ဘဏ်ခွဲများဖန်တီးခြင်းကိုကူညီရာတွင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်သင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရရန်သေချာစေရန် cookies များကိုသုံးသည်။ သင် FiduLink.com ဝက်ဘ်ဆိုက် (သို့) subdomains များကိုဆက်လက်သုံးနေလျှင် FiduLink.com website သို့သင်၏လည်ပတ်မှုကြောင့်သင်ပျော်ရွှင်နေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယူဆလိမ့်မည်။ငါကိုလက်ခံ